Home Somali News Wasiir Xirsi “Siyaasadu waa Hiraal Bandhiga Aragti Bulshadda Qancin Karta”
[quote]“Ragga Kursiga u Haliilaya waxaan leeyahay “Xilka Illaah baa bixiya, Samadaana laga bixiyaa ee ee ha qawadin nasiibkaaga”[/quote]
Wasiirka wasaaradda Madaxtooyadda Somaliland Md. Xirsi Cali Xaaji Xasan, ayaa siyaasiyiinta mucaaridka ah ku booriyay in aanay kalsoonida bulshada u marin inay ku hantaan aflagaado, waxaanu ugu baaqay inay la yimaadaan qorshe siyaasadeed oo mustaqbal.
Wasiirku waxa uu sidaasi ku bayaamiyay qoraal hogga-tusaale iyo xog-waran iskugu jiray oo uu ku baahiyay bartiisa Internet-ka ee Guusha.com. waxa kale oo uu qoraalkaas tafaasiil kaga bixiyay halka uu marayo dhismaha jidka Ceerigaabo oo gaadhay heer yididiilo leh.
Qoraalka Wasiir Xirsina waxa uu u qornaa sidan:-“:Siyaasadu waa Hiraal “Political Vision” , bandhiga aragti bulshadda qancin karta iyo barnaamij siyaasadeed taasi ayaad ku kasban kartaa taageerayaal tiro badan isla markaana qalbigooda iyo codkoodaba lagu hantaa balsecay iyo ceeb toona cod laguma helo.
Dardaaran kooban oo ku aadan siyaasiyiinta u fahmay kasbashada quluubta shacabka cay iyo ceebayn:-
Waxaa mudooyinkii u dambeeyey muuqanayey siyaasiyiin u fahmay tartanka siyaasadda aflagaado iyo hanjaabado aan macno badan lahayn isla markaana dhagaha shacabka ku ridayay hadalo deelqaaf ku ah qaranimada shacabku dhisteen waliba sidaas ku moodaya in ay hayaan jidkii saxda ahaa ee lagu helayey cod iyo cudud shacab.
Waxaan aaminsahay in siyaasadu tahay Hiraal “Political Vision” , bandhiga aragti bulshada qancin karta iyo barnaamij siyaasadeed taasina lagu kasban karo taageerayaal tiro badan isla markaana qalbigooda iyo codkoodaba lagu hanto balse aanay ahayn cay iyo ceeb toona codna lagu helin!.
[quote]Waxaa cad in tartan soo socdo isla markaana lagu tartami doono xisbi walba sida uu u soo bandhigo waxqabad iyo aragti horumar waxaan leeyahay “Tartan diyaarbaanu u nahay ee miidaanka kaalaya, dhaliil diyaar baanu u nahay wixii aanu leenahay, toosin iyo sixitaana diyaar baanu u nahay.”[/quote]
Waa la ogaa shalay makaan bilownay jidka Ceerigaabo kuwii beeninayey ee lahaa samayn maysaan kuwii lahaa lacag ayaa lagu lunsanayaa kuwii dadka qalbiga ka jabinayey in cadceedu dabadooda kasoo baxday oo waxaad maanta marag ka tihiin in 150km aanu dhamaynay oo isugu jirta wax daamurkii la saaray iyo wax gabogabo marayaba oo WAXAA BUSHAARO AH IN AANU KEENAY DAAMURKII WADADA DHAMAYSTIRI LAHAA OO DHAN OO HAL FOOSTO NAGAMA MAQNA.
Ugu dambayn waxaan siyaasiyiinta xasuusinayaa in cayda iyo qabylaadu tahay wax dhaqankeena ka caagan umaduna birimagaydo iyo milgo leedahay ee aan siyaasada iyo tartanka la qalad fahmin!Wa Bilaahi Tawfiiq.”